Sida loo rakibo Arch Linux + KDE ama LXDE | Laga soo bilaabo Linux
Laba akhristayaal baloog (Edward2 y Kitty) waxay i weydiisteen inaan qoro hage rakibo oo aan ku isticmaalo distro aan isticmaalo, Arch Linux.Yeynaan ku qaadin waxyaabo badan oo laga sheegay qaybintaan, maahan wax sahlan oo la rakibo, laakiin sidoo kale ma adka. Waa hawl dheer.
Rakibaadda Arch Linux waxay u qaybsan tahay laba qaybood:
1: Saldhig rakibo
Ahaanshaha talaabo guud oo jawiga oo dhan ah Waxaan uga tagayaa xiriiriye hagaha weheliyaha elav <º Linux
Mar alla markii aan rakibnay Arch Linux-keena waxaan aragnaa in konsol noo furmayo, taasi waa sababta oo ah maanaan rakibin wax aan ka ahayn nidaamka aasaasiga ah.
Waxaan u galaynaa habka xididka oo aan dhignaa lambarkayaga sirta ah.
Waxaan doorannaa muraayadaha haddii aanan sidaas yeelin
Waxaan doorannaa kuwa aan dooneyno, laakiin ma ahan sababta oo ah waxay ka yimaadeen waddankeenna ma noqon doonaan kuwo dheereeya, shaqsiyan waxaan haystaa labadii ugu horreysay ee ka timid Brazil
Tallaabada xigta waa in la cusbooneysiiyo nidaamkeena, tan waxaan u qoreynaa waxyaabaha soo socda
Kadib markaan cusbooneysiiyo marwalba waxaan ku nadiifiyaa baakadaha aan waxtarka lahayn iyo keydadka aan la isticmaalin amarka soo socda
Markaan sidan yeelno, waxaan u qaabeynaa faylalkayaga haddii aynaan habayn
Kuwa Spain ka yimid, faylka waa inuu noqdaa sidan
Faylka soo socda ee la rakibayo wuxuu noqon doonaa pacman.conf
udub dhexaadka, dheeraadka ah iyo bulshada waxaa lagu dhaqaajiyaa qaab ahaan waxaana ku darnaa bakhaarka soo socda
keydkani wuxuu noo ogolaan doonaa inaan rakibno Yaourt.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in la abuuro adeegsadeheenna, waxaan u abuuri doonnaa sida soo socota
waxaan raacnaa tillaabooyinka qaabeynta isticmaaleha cusub
Hadda waa inaan ku darno isticmaaleyaasheena kooxaha maqalka, awoodda, gawaarida, keydinta, fiidiyowga, muraayadaha, floppy iyo lp sida soo socota
koox kasta waxaan u bedeleynaa «maqal» mid u dhigma
Waxa xigi wuxuu noqon doonaa rakibida codka
Waxaan ku darnaa jinka Alsa
Waxaan rakibnaa X.Org
Hadda waxaan rakibnay jawigeena garaafka
Waxaan kugula talinayaa ikhtiyaarka Kdebase wax badan, sidaa darteed waxaan ku dhejin karnaa sida aan rabno
Kuwa soo socdaa waxay noqon doonaan shaashadda gelitaanka, shaqsi ahaan waxaan u isticmaalaa Gdm
loogu talagalay dadka isticmaala Kde-ka Kdm waxaa lagu rakibay deegaanka ama Kde ama Kdebase
Waxaan bedeleynaa bootloader
hadda waxaan uga tagnay khadka soo socda sidan
Waxay kuxirantahay maamulaha aan adeegsano, waxaan uga tagi doonaa sadarka soo socda hal dhinac ama qaab kale
Haddii aan rabno in nidaamkeenu shaqeeyo waxaan ku darnaa dbus daemon
Waxaan rakibnaa Yaourt
Diyaar, waxaan horeyba uheysanay Arch Linux-ga
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo rakibo Arch Linux + KDE ama LXDE
Casharbaris aad ufiican, waxaan horeyba uhelay talaabooyinka ladiray si aan u sameeyo rakibida, laakiin ma aqaano waxa daemons ah ee lagu daro kor u kaca USB-ga iyo disk-ka leh qaybaha ntfs waxaan u maleynayaa inay tahay ntfs-3g. Laakiin waan maqanahay qaar baa ii sheegi kara haddii ay tahay hal, fam ama gamin.
Hal iyo fam waxay gaar u yihiin Gnome waxaan qabaa, taasi waa sababta aanan u dhigin, gaar ahaan ma lihi midkoodna way igu habboon tahay aniga
Si kor loogu qaado USB-yada iyo ntfs disks-yada loo kala saaray waxaan aaminsanahay oo i sixi doonaa hadii aan khaldanahay waxaa gacanta ku haya udev hada. In rakibiddayda 'Arch + gnome3, daemon-ka kaliya ee aan dhigay wuxuu ahaa dbus oo moduleka kaliya ayaa ahaa fiyuus. iyo wax kasta oo ok iyo dhibaato la'aan, waan aqrin karaa qaybta Winbug 7 leedahay oo aan kor u qaadi karaa usb-ka xitaa aniga oo aan samayn wax qaabeyn ah ama rakibida wax aan ku tiirsaneyn miiska ama salka.
Waxaan u maleynayaa kde inay isku mid tahay, sidaa darteed waa inaad ku dartaa kaliya daemons-ka ay kuu sheegayaan wiki.
tutorial aad u fiican geesinimo mahadsanid, laakiin waxaan qabaa su'aal, muraayadaha pacman waa hagaagsan yihiin haddii aan ku daro wax ka badan hal muraayad.
Hadday caadi tahay runtii waad kaxoroon kartaa dhammaan muraayadaha oo waxaad isticmaali kartaa qoraalka darajooyinka si aad u doorato kuwa ugu fiican.
si aad uga xumaato muraayadaha, u saxee faylkaaga /etc/pacman.d/mirrorlist
# /Etc/pacman.d/mirrorlist Nano
tan waxaad ku rakibaysaa curl: (iyo Python haddii aadan rakibin)
ka dibna u beddelo tusaha /etc/pacman.d oo leh:
hayaan faylkaaga muraayadda
# cp muraayadda liiska muraayadda
markaa waa waqtigii la samayn lahaa darajaynta (muraayadaha badan ee aanad ka murugoon, muddada ay qaadanayso in la helo kuwa ugu fiican)
# darajooyin -n 6 liiska muraayadda. dib u soo celinta> liiska muraayadda
Tani waxay raadineysaa 6da muraayadood ee ugufiican feylka muraayadda.fiirinta iyo markii ay dhammeeyaan waxay ku keydin doonaan liiska muraayadda haddii aad rabto inay noqdaan kuwa ugu fiican 8 "-n 8" iyo haddii aad rabto inaad isticmaasho caqli badan.
ka dib markaa waxay u egtahay in loo waafajiyo pacman muraayadaha cusub:
Aad baad u mahadsan tahay, waxaan ku xisaabtami doonaa inaan rakibo fayladayda. Salaan.
Geesinimo, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay macquul tahay sababta aad u isticmaasho LXDE iyo maxay yihiin faa'iidooyinka iyo qasaaraha. Dhowr bilood ka hor ayaan ka soo rakibey CD-ga tijaabada Debian laakiin maareeyaha feylku wuxuu lahaa cilad mana u furin si kasta, sidaa darteed waxaan ku dhaqaaqay inaan ka saaro oo ma aanan tijaabin.
iyada oo loo marayo dijo
Oscar, iskuday Lubuntu waxaadna arki doontaa inay ka dheereyso hillaaca!
Kiiskeyga wax badan ayaa ka soo baxa maxaa yeelay Arch wuxuu adeegsadaa KISS, kuwaas distros-ka ah waa kuwo aad u raran (the * buntu)
Laakiin rakibaaddaadu waa mid aan waxtar lahayn haddii aadan internet lahayn. Haddii aad ii sheegi doontid inaan ka soo dejiyo internetka internetka, waxaan ka sii fiicnaan lahaa inaan kala soo dego distro sida opensuse ama kubuntu.
Waxaan ka codsanayaa ogolaansho maamulayaasha inay furaan maqaal ku saabsan LXDE
Kaalay… ka tag HAHAHA wax aan jirin, dabcan waad awoodi kartaa…. LOL
Aan aragno, aragti ahaan waxaan daryeelaa wax kale (inkasta oo ay dhimatay badhkeed) taasi waa sababta aan u waydiiyo
Waxaad qoreysaa waxaad rabto, taasi wax dhib ah malahan 😀
Kaliya iskuday inaad qorto wax aan soo noqnoqon, tusaale ahaan hadaan horeyba uqornay cashar kusaabsan sida loo rakibo Debian + KDE, macno malahan inaad sameyso mid kamid ah "Ku rakib KDE Debian" 😉
Haddii qof uu ku rakibay Linux Linux arch in virtualbox oo uusan cusbooneysiin karin keydadka sida aniga igu dhacday, xalka ayaa ah:
IWM / rc.conf, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dhex gasho isku xirka:
ISGUDUB = (eth0)
Ka dibna pacman -Syu.
Maya, ma shaqeyso, ugu yaraan aniga aniga ima uusan shaqeyn.
Waxaan haystaa 3 maalmood aniga oo aan awoodin inaan sameeyo shaqo qaanso ah, dhab ahaan aniga maahan.
Haye, waxaan raacay hagaha rakibida kdebase wax walbana way ila muuqdeen, laakiin markii aan galayay kde waxay ku dhegtay boodbood iyo markii laba-gujiska shaashadda madoobaaday (tartiib-tartiib, sida inay tahay shaashad-qaade) mana aysan sameynin desktop ayaa u muuqday. Miyay wax ka noqon kartaa wadayaasha?
Jid ahaan, ma geli karo wax kale oo tty ah maxaa yeelay nabarro waaweyn ayaa ka muuqda bartamaha shaashadda (?) Iyo, galaya hab nabadgelyo leh (failsafe), ma weydiisanayo soo galitaan midkoodna.
Ku jawaab Kyz
Hagaag, waan gartay. Waxaan u baahday in aan dib wax walba u rakibo oo markan ku rakibo wadayaasha sawirada, kahor inta aan rakibin kde.
Laakiin ugu dambeyntii waxaan haystaa Arch-kii iigu horreeyay !! 🙂
Sure, darawallada ayaa horay u sii socda
haha waqti fiican, ku raaxee 😀
Imaatinka "systemd" ee ArchLinux (hadda ISO Dec 2012), ma jirto meel laga hadlayo rc.conf.
Waxaan u maleynayaa in qoraalkan la cusbooneysiinayo. Ha u qaadan xumaan.
Ku jawaab Berbellon
Qoraalkan ayaa ka weyn hal sano, mudane, ma cusbooneysiin kartid qoraal kasta oo la soo dhaafay, laakiin qor boostada cusub ee la cusbooneysiiyay haddii loo arko inay ku habboon tahay ...
adeegsadayaasha -rad -m -g -G maqalka, muuqaalka, giraangirta, awooda, keydinta, indhaha, lp, ciyaaraha -s / bin / bash pedro
oo waxay ii sheegaysaa sugitaan la'aanta qof ma iga caawin karaa arrintan